Isiqendu sika-Shakira eCarpool Karaoke sidutyulwe e-Barcelona kwaye sizakufumaneka namhlanje | Ndisuka mac
Ukusukela ekuqaleni kuka-Agasti, amakhwenkwe e-Cupertino ebesazisa ngesiqendu esitsha seCarpool Karaoke qho ngeveki, inkqubo apho amagcisa azo zonke iintlobo, engahambelani nomculo kuphela, athetha ngomculo awuthandayo, izinto azithandayo nezinye Ngoxa beqhuba behamba esixekweni apho bahlala khona.
Kwiiyure ezimbalwa, abafana baseCupertino bazokwazisa ngesiqendu esitsha, isiqendu ngeli xesha njengemvumi yaseColombia uShakira kwaye irekhodwe kwisixeko saseBarcelona, ​​apho ahlala khona ngoku. Iqabane lomculi waseLatin nguTrevor uNowa, Umlingisi waseMzantsi Afrika, umhlekisi kunye nomsasazi ngonomathotholo kunye nomsasazi kamabonakude.
Esi siqendu saba sesokuqala ukurekhodwa ngaphandle kwaseMelika, ngenxa yokuba imvumi yesiLatin ihlala kwilizwe lethu. Ngexesha lesiqendu uShakira ucula ingoma yeZombie yiCranberries ukongeza kwingoma kaWu-Tang Clan kunye neWaka Waka yabo yakudala Ngexesha lokurekhodwa kwesi siqendu, isithuthi esiqhutywa nguTrevor Noah sidlula ISagrada Familia, iPlaza Catalunya kunye neVenkile yeApple ePasseig de Gracia.
Kwi-Sagrada Familia, bobabini bayamisa ngokunyanzeliswa kwaye u-Shakira ujikelezwe linani elikhulu labalandeli ngelixa u-Trevor Noah ujonge ukuba akukho mntu umaziyo ukuba ungubani. Ukuze ukonwabele iziqendu ezenziwa ngu-Apple Music veki nganye kwiCarpool Karaoke, kufuneka ubhalise kule nkonzo yomculo, inkonzo efumanekayo nge-0,99 euros ngenyanga kwiinyanga ezintathu zokuqala kubo bonke abo Ndizamile.
Ukuza kuthi ga ngoku phakathi kwabanye babalinganiswa abaye bavela ngaphambili sifumana uSeth McFarlane (umphathi wee-Oscars galas ezininzi kunye nomdali weFamily Guy), uAriana Grande, uSophie Turner, Maisie Williams, Will Smith ... Emva kosasazo lweziqendu ezininzi , kubonakala ngathi abagxeki abayifumenanga kakuhle le spin-off apho uJames Corden anyamalale khona kwaye apho abantu abadumileyo ababini kufuneka baqale incoko ngamanye amaxesha engenayo nentloko okanye umsila okoko bethetha ngento yokuqala ethi qatha engqondweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Isiqendu sikaShakira eCarpool Karaoke sidutyulwe e-Barcelona kwaye sizakufumaneka namhlanje
ukwenza umzekelo unganxibanga bhanti.
Olu luphawu lokuqala lwe-Apple Watch Series 3